Cunto: Sababta Sababta Shabakadda Isku Weydaagi Karaa
laga bilaabo bogag badan oo ku kaydi faylasha. Sida laga soo xigtay Hartley Brody (oo ah qoraaga Hagaha Macmiilka ee Webka Digriiga), oo ah horumariye websaydh iyo hoggaamiye tiknoolaji, duubista webka waxay noqon kartaa khibrad xiiso leh oo faa'iido leh. Hartley Brody ayaa soo koobtay waxyaabo kala duwan oo ka yimid bogag badan, sida blogyada muusikada iyo Amazon.com - negotiating credit card debt. Iyada oo uu waayo-aragnimadiisa ah, wuxuu fahmay in ficil ahaanba laga heli karo website kasta. Kuwa soo socda ayaa ah sababaha ugu sareeya ee webka loo qodo wuxuu noqon karaa khibrad xiiso leh.
Websaydhyadu waxay ka fiican yihiin API-yada
Inkasta oo websiyo badani leeyihiin API, waxay leeyihiin xadidaad badan. Haddii ay dhacdo in API la helo dhammaan macluumaadka, baarayaasha webka waa inay u hoggaansamaan xaddigooda xaddiga ah. Websaytku wuxuu isbeddel ku sameyn doonaa boggooda, laakiin isbaddallada isku mid ah ee qaabka xogta ayaa ka tarjumi doona maalmaha API ama xitaa bilo kadib. Laakiin suuqyada internetka ayaa waxtar u leh barnaamijyada API-da. Tusaale ahaan, mar kasta oo ay galaan bog (sida Twitter), foomamka saxiixa dhammaantood waxay la sameeyeen API-ga. Xaqiiqdii, API wuxuu qeexayaa qaababka barnaamijka software-ka qaarkiis ay la xiriirto mid kale. Ganacsiyada Ha u Isticmaalin Badmaadka Badbaadada
Raadinta Webku waxay isku dayi kartaa inay xoqdo meel gaar ah oo ka badan hal jeer, iyada oo aan wax dhibaato ah. Maanta shirkado badan ayaan haysan nidaam difaaca oo xooggan si ay u ilaaliyaan goobta ay ka soo horjeedaan helitaanka gawaarida..
Sida loo xareeyo Site
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu horreeya ee raadiyeyaasha webka sameeyaa waa in ay abaabulaan dhammaan macluumaadka ay u baahan yihiin hab gaar ah. Dhammaan shaqada waxaa lagu sameeyaa koodh la yiraahdo 'scraper', kaas oo u diraya su'aalaha bogga internetka ee gaarka ah. Kadibna, waxay ka dhigtaa dukumeentiga HTML iyo raadinta macluumaadka gaarka ah.
Websaydhyada Deeqaya Better Navigation
U diyaarsanaan la'aanta API aan habaysan ayaa noqon kara hawl aad u adag, waxayna qaadan kartaa saacado. Maanta internetka waxay leeyihiin qaab nadiif ah, oo si fudud ayaa loo xaaqi karaa.
Helitaanka Qurxinta Naqshad Sawireed ee wanaagsan
Hartley Brody wuxuu diiradda saarayaa samaynta cilmi-baaris si loo helo laybereeriga farsamaynta HTML ee luuqada ay doortaan. Tusaale ahaan, waxay isticmaali karaan Python ama Muuqaal Qurxoon. Waxa uu tilmaamay in ganacsatada internetka ee isku dayaya in ay soo saaraan macluumaadka qaarkood waxay u baahan yihiin si ay u helaan URL-yada si ay u codsadaan iyo qodobada DOM. Markaa maktabadaha waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka qaraabada.
Dhamaan goobaha la xiiri karo
Dad badan oo ganacsadeyaal ahi waxay rumaysan yihiin in bogagga qaarkood aan la xoqin karin. Laakiin taasi run maahan. Dhab ahaan, shabakad kasta waa la xoqin karaa, gaar ahaan haddii ay isticmaasho AJAX si loo buuxiyo xogta, si fudud ayaa loo xoqin karaa.
Uruurinta Xaqiijinta Xaqiiqda
Isticmaalayaasha waxay ka heli karaan waxyaallo badan oo laga helo bogag kala duwan. Waxay kaafin karaan xogta kala duwan si ay u dhamaystiraan shaqadooda iyagoo ku fadhiya uun kumbuyuutarkooda.
Cunsurrada ugu Muhiimsan ee Loo Isticmaalayo Maqnaanshaha Webka
Meelo badan oo ka mida bogagga maanta ma oggola in la xoqo webka. Sidaa darteed, baarayaasha webka waxay u baahan yihiin inay akhriyaan shuruudaha iyo shuruudaha goob gaar ah si ay u arkaan haddii loo ogol yahay inay sii wadaan. Waa inay sidoo kale ogaadaan in boggaga internetka qaarkood isticmaalaan software oo joojiya sawirrada webka. Waxaa sidoo kale jira shabakado internet oo si cad u muujinaya in dadka soo booqda ay u baahan yihiin inay u sameeyaan cookies si ay u helaan.